Hungary oo eedeynaysa qaxooti - BBC Somali
Hungary oo eedeynaysa qaxooti
Image caption Boliiska ayaa dadka ku kala eryay gaaska ilmada dadka ka keena iyo biyo.
Dowladda Hungary ayaa sheegtay inay xirtay nin lagu eedeynayo inuu hogaaminayay rabshadihii ka dhacay xuduudda ay la leedahay Serbia. Ninka ayaa lagu eedeynayaa inuu xiriir la leeyahay koox ka dagaalanta Suuriya.
Afhayeenka dowladda ayaa sheegay, in ninka uu ka mid ahaa dad abaabulay rabshadaha dhexmaray qaxootiga iyo boliiska.
Madaxa hayadda Qaramada Midoobay ee xaquuqda bini'aadanka ayaa ku biiray cambaarayn loo jeediyay Hungary, oo gaaska ilamada dadka ka keena iyo biyo u isticmaashay qaxooti ay ku jiraan dumar iyo carruur.